मतदाताहरुले मप्रति देखाएको विश्वासले नै म चुनाव जित्छु भन्नेमा ढुक्क छु : पौडेल – ebaglung.com
मतदाताहरुले मप्रति देखाएको विश्वासले नै म चुनाव जित्छु भन्नेमा ढुक्क छु : पौडेल
२०७४ बैशाख २६, मंगलवार १६:११	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
बागलुङ २०७४ बैशाख २६ । आसन्न स्थानीयतहको चुनाबलाई लिएर बागलुङमा यतिबेला दलहरुले कसरी जनताको मन जित्न सकिन्छ भन्दै बिभिन्न किसिमका काम गर्छौ हामीलाई बिजयी गराउनु भन्दै जनताको घरदैलोमा मत मागी रहेका छन । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट जैमिनी नगरपालिकामा मेयर पदमा उमेदवार ईन्द्रराज पौडेलले पनि जनता समक्ष यस्तै सपना बाड्दै घरदैलोमा पुगेका छन ।
बागलुङ जिल्लाको अति बिकट साबिक जैदी गाविसमा जन्मिएका पौडेल राजनैतिक यात्रामा त्यति सक्रिय ब्यक्ति भने होईनन् । उनको १७ वर्ष शिक्षण पेशामा बितेको छ । जैदी बेलबगरको सस्कृत उच्च माध्यमिक बिद्यालयमा २०५२ साल देखि २०६९ साल सम्म प्रार्चायको रुपमा रहेर अबकाश पछि पौडेल नेपाली कांगेसमा सक्रिय देखिएका हुन । पौडेल नेपाली कांग्रस बागलुङ क्षेत्र नम्बर २ बाट महाधिबेशन प्रतिनिधि, छिस्तीमा रहेको राधाकृष्ण मन्दिरको अध्यक्ष लगाएत विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा रहेर सामाजिक सेवामा सक्रिय रहदै आएका ब्यक्ति हुन् ।
यसै क्रममा सोमबार मतदाताहरुसँग भोट माग्न राङखानी पुगेका पौडेललाई पत्रकार केदार शर्माले फोन सम्र्पक गरि गरेको संक्षिप्त कुराकानी
* जनताको घरदैलोमा पुग्दा तपाँईबाट जनताले के आशा गरेको पाउनु भयो ?
यो झण्डै २ दशक पछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनाव हो । लामो समय पछि निर्वाचन हुन थालेकाले जनतामा एक खालको उत्साहा देखिएको छ । जनताले आफैले चुनेको जनप्रतिनिधि चाहेको मैले बुझेको छु । आफुले रोजेका जनप्रतिनिधिले नगरको विकास गरुन भन्ने चाहना त जुन सुकै नगरबासीको मनमा हुन्छ नै, जनताको चाहानालाई कसरी निहालेर अगाडि बढन सकिन्छ भन्नेमा म सचेत छु ।
प्रचार अभियानमा मतदाताहरुको घरदैलामा पुग्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका बिकास निर्माण कामले गति नलिएको र कतिपय ठाँउमा तिनको उचित ब्यबस्थापन नभएको देखियो । जनताले पनि यिनै क्षेत्रमा पहिला बिकास हुनु पर्ने चाहाना राखेको पाएँ । घरदैलो कार्यक्रमा मतदाताले म प्रति व्यक्त गरेको विश्वासको आधारमा म भन्न सक्छु, विजयको नजिक रहेको छु ।
* तपाईको चुवाबी एजेण्डा के के छन ?
नगरको चौतर्फी विकाससंग यहाँका जनतालाई सामाजिक न्याय दिलाउने मेरो प्रमुख काम हुनेछ । जैमिनी नगरपालिकामा धेरै बिकास कार्यहरु गर्न बाँकी छ । मुख्यतः यस जैमिनी नगरपालिकाको भौगोलिक बिकटताले यस नगरको बिकासमा केहि असहजता रहेपनि यस नगरपालिकाको हरक्षेत्र र पक्षको बिकासमा म दृढ भएर लाग्ने विश्वास दिलाउन चाहान्छु । मैले कृषि, यातायात स्वास्थ्य र गरीबी उन्मुलनका बिषयलाई प्राथमिक्ताका साथ अगाडी सारेको छु ।
सर्ब प्रथम त मेरो काम भनेको यहा भएको बाटो घाटोलाई १२ महिनानै नियमित रुपमा संचालन गर्ने हुन्छ, त्यस्तै यस नगरपालिकाका साबिक गाबिसहरु तथा हालका सम्पूर्ण वडाहरुमा स्वाथ्यचौकी स्थापना गर्दै जनताको स्वास्थ्यको सुनिश्चिता पनि मेरो प्रमुख एजेण्डा हो ।
जैमिनी नगरपालिका भित्र रहेका पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरि तिनको प्रचार प्रसार गरि नगरलाई पर्यटनमैत्री नगर बनाउने मेरो संकल्प छ । यस नगर भित्र रहेका हाँडिकोट, गाजाको दह, पुरानो गाँउ लगाएतका ठाँउलाई पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा बिकास गर्दै आन्तरिक एवं वाह्य पर्यटकहरुको लागी आकार्शक गन्तव्य बनाउने मेरो प्रयास रहने छ ।
यस्तै कृषिको कुरा गर्दा कृषिलाई आधुािनकरण गर्दै यस नगर भित्र रहेका उर्बरा भुमि छिस्तीको चितपानीको फाँट, अङलुङको फाँट,ढाबको फाँट जैदीको लौंवाको फाँट चौरको फँट,अर्जेवाको सुमसाको फाँट र निरिङगेको फाँट जस्ता उर्बरा भुमिमा आधुनिकरण गर्दै कृषिमा अब्बल गराउदै प्राबिधिक कृषिमा मुख्यत बिकाश गर्न सकिन्छ यस्तै शिक्षाको कुरा गर्दा अहिले साबिक कुश्मीसेरमा मात्र हाई स्कुल मात्र छ, धेरै बिध्यार्थी उच्च शिक्षाको लागि नगर भन्दा बाहिर जानु पर्ने तथा साबिकका गाबिसमा पनि माध्यमिक तहका मात्र बिद्यालय रहेको र जैदीको सस्कृत माध्यमिक बिद्ययालयलाई उच्च शिक्षा हाँसिल गर्ने क्षेत्र गराउन सकिने र अन्य वडाको हिसाबले प्रत्यक वडामा प्राबिधिक शिक्षाको बिकाश गर्ने मेरो योजना छ ।
यस नगरपालिकाको गरिवी नै मुख्य समस्या हो । म मेयर भए पछि नगर भित्ररहेको गरिवीको डाटा संकलन गर्ने र अबको ५ बर्ष भित्रमा यस नगर भित्रका गरिवीकोे पहिचान गरि मैले तिनीहरुको जीवनमा बाह्रै महिना खाना पुग्ने किसिमले गरिीको क्षेत्रमा काम गर्ने छु । अनि यातायातको क्षेत्रमा कुरा गर्दा अहिले सबै वडाकम नाका खुले पनि साबिक छिस्ती गाबिसमा नाका नखुलेको र त्यस क्षेत्र अब कालीगण्डकी करिडोरले नाका खोल्ने क्रममा रहेको र त्यस क्षेत्रलाई कुश्मीसेरा को बाटो हुदै राङखानी देखि छिस्ती जोडेर त्यसलाई रिङरोडको बिकास गर्ने र त्यस क्षेत्रका जनतालाई सुबिधा दिने र अबको ५ बर्षमा जैमिनीघाट देखि पालुङखोला सम्म जलयात्रा संचालन गर्ने योजना बनाएको छु ।
* तपाईले चुनाब जित्ने विश्वासिलो आधार के हो ?
चुनाव जित्ने आधार जनताले गरेको विश्वास हो । म मेयर भए भने नगरको विकाससंगै जनचाहना पुरा गर्न भन्ने विश्वास मतदातामा छ । मलाई सबै जनताको उत्तिकै मयाँ, ममता, साथ र स्नेह रको छ । मैले चुनाब जिते पछि म पार्टीको मात्र नभएर सबै जनताको मेयर हुनेछु ।
कसैकसैले आफ्नो पार्टीले जिते पछि मात्र आफ्ना काम हुन्छन र अर्को पार्टीले चुनाब जिते काम गर्न असहजिलो हुन्छ भनेको सुनेको छु, तर मैले जनताहरु समक्ष के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने जिते पछीको अवस्थामा पनि मेरो काममा कुनै राजनीतिक गन्ध आउन दिने छैन । मैले नगरवासीको विश्वास तोडदिन तोडन पनि हुदैन ।
* चुनावी प्रतिष्पर्धा कस्तो पाउनु भएको छ ?
चुनाब भनेकै प्रतिस्पर्धा गर्ने खेल हो । यो सरकार चलाउन नागरिकबाट असल व्यक्ति रोज्ने खेल भएकाले रोचक र चुनौतिपूर्ण पनि हुन्छ । तर मलाई प्रतिष्पर्धा गर्न गाह्रो छैन । मेरो कामलाई सबैले नजिकबाट महसूस गर्नूु भएको छ । सबैले मलाई अमुल्य मत दिनुहुन्छ भन्ने विश्वासले म चुनाब जित्नेमा ढुक्क छु ।
चुनाव जीते सरकारी सुविधा नलिने माओवादी केन्द्रका उमेदवारको उद्घोष